Qoraal ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo oo loo diray Beesha Caalamka - Awdinle Online
Midowga Musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ku lugleeyahay colaadda kasoo cusboonaatay magaaladda Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Sidda ay ku sheegeen qoraal ay u direen wakiiladda Beesha Caalamka, madaxweyne Farmaajo ayaa kasoo horjeeda xal laga gaaro xiisada gobolka Gedo kana shaqeynaya isku-dhaca ciidamo Soomaaliyeed.
“Madaxweynuhu waa in uu ka fogaadaa dhiiragelinta maleyshiyaadka degaanka ee Jubaland iyo qaybaha kale ee waddanka waxaana ku waajib ah in uu wadahadal ku dhamaayo khilaafyadda maxaliga ah ee taagan,” ayay kusheegeen warqadan ku taariikheysan 25-ka Janaayo, 2020.
Dowladda federaalka ayaa sheegtay in ciidamada Kenya ay dagaalkaas qeyb ka ahaayeen lana safteen dhigooda Jubaland. Balse, Nairobi iyo Kismaayo waxay ganafka ku dhufteen sheegashadda xukuumada Muqdisho.
Dhanka kale, musharaxiinta ayaa qoraalkooda waxay ku caddeeyeen in dowladda federaalka aysan wadin wax dhaqdhaqaaq ah oo lagu soo gabagabeynayo is-mari-waaga ka taagan doorashooyinka si waqtigeeda ugu dhacdo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo gaadiid waaweyn ku daabushay Ciidankii lagu qabtay dagaalkii Beled-Xaawo
Next articleDFS oo sheegtay in Jabuuti Kenya ku taageertay faro-gelinta Arrimaha Soomaaliya